Degso Farming Simulator 14 loogu talagalay Windows
Degso Farming Simulator 14
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (67.00 MB)
Degso Farming Simulator 14,
Beeraha Beeraha 14 ayaa ah kan ugu caansan cayaaraha jilitaanka beeraha waxaana bilaash looga heli karaa daaqadaha Windows iyo sidoo kale mobilada. Ciyaarta jilitaanka beeraha, oo aan ku beeri karno beerteenna sida aan rabno, annaga oo adeegsanayna cagafyo ay soo saareen shirkado dhab ah, waxaa loogu talagalay in si fudud loogu ciyaaro kiniiniyada iyo kombiyuutarada labadaba.
Haddii aad raadinayso ciyaar beer -xaaqis ah oo bixisa sawirro tayo leh iyo ciyaar madadaalo leh oo aad ku soo dejisan karto oo aad bilaash ugu ciyaari karto kiniinigaaga Windows 8 iyo kombiyuutarka, Beeraha Simulator 14 waa hubaal ciyaarta ugu horreysa ee ay tahay inaad fiiriso. Ciyaarta oo leh ciyaar -ciyaar adduun furan, waxaan ku beeran karnaa alaabooyin kala duwan sida sarreen, galley iyo canola beeraheena oo aan ku iibin karno suuqa. Waxa kale oo suurtogal ah in dakhligeena la kordhiyo iyada oo caano laga iibsado lodeena aan ku quudino kuna korno cawska iyo cawska, iyo in aan ku iibino cawska iyo cawska warshadda noolaha.
Beeraha Beeraha 14 waa ciyaar jilid tayo leh oo kugu quusin doonta ciyaarta waqtiga-dhabta ah. Soosaarka, oo aan u malaynayo inaad ku raaxaysan doonto nooca tijaabada ah, waa inay qurxisaa aaladda qof kasta oo jilitaan jilitaan leh.
Barnaamijyada La Xiriira: Degso Farming Simulator 22
Farming Simulator 14 Noocyada
Cabirka Faylka: 67.00 MB